I-Molecular Cuisine kanye nezinye izinhlelo zokusebenza ze-Culinary - Hielscher Ultrasound Technology
Umhlahlandlela Omfushane kuya Izimiso
Iningi okuqukethwe kulo mhlahlandlela ulwazi lutholakala kalula, kodwa ngezinye izikhathi ezibhaliwe ngendlela akusho ngaso sonke isikhathi ukwenza ukufunda kube lula ngaphandle kokuthi kwenzeke ukuba ujwayelene imigomo asetshenziswa.
Ngezansi, imigomo ebalulekile sonication ezifana sonotrode, njll amplitude nemiphumela yabo kuzinhlelo zokusebenza Culinary zichazwe.
Lo mhlahlandlela ngezansi ezama ukuchaza ukusetshenziswa homogeniser ultrasonic ngendlela ngaphansi kwesayensi futhi Culinary ngaphezulu ezihlobene.
Ultrasound Waves futhi Isicelo yabo Ukudla
I homogeniser ultrasonic njengoba inqubo kade iminyaka eminingi ngezindlela ezihlukahlukene, kodwa kuphela nje ukuthola indlela yayo ku siyibuka ngelinye iso izicelo Culinary. I homogeniser iqukethe ezinye electronics eyinkimbinkimbi ezingasetshenziswa ukuguqula futhi ukulawula amandla kagesi ku okusezingeni eliphezulu imvamisa kunyakaza ichopho metal noma sonotrode.
I sonotrode ihamba ngokuyinhloko phezulu phansi imvamisa ngempela eliphezulu ngenhla ububanzi ezwakalayo (isb izikhathi 26000 ngomzuzwana noma 26Khz ne UP200Ht). Inani ukuthi sonotrode ihamba phezulu naphansi libizwa amplitude futhi ngokuvamile kungase kushintshwe phakathi 9 futhi 240 μm (izinwele womuntu ovamile emhlabeni 100 μm obukhulu ukuze uthole inkomba). Ngamagama alula lo sonotrode oziphatha njengongqingili piston ezihambayo up and down in the ketshezi.
Njengoba sonotrode ihamba yenyuka ngesikhathi esifanayo ibe egxilile uketshezi, idala izindawo umfutho ophakeme futhi ongaphakeme ngaphakathi ketshezi emhlabeni sonotrode lokhu kuyithuba kudala lomkhuba eyaziwa ngokuthi cavitation. Sibona ekhishini ukuthi ukwehlisa ingcindezi (efana sealer chamber) ebangela lolu ketshezi ubilise at okushisa aphansi futhi bayikhulise ingcindezi (ezifana cooker ingcindezi) ebangela lolu ketshezi ubilise ezingeni lokushisa eliphakeme.
I ngokushesha ziyaguquguquka ingcindezi pulsations ngesikhathi ichopho sonotrode abangele ukwakheka kanye nciphisa ke okusheshayo Bubbles ngaphakathi ketshezi. Lokhu konke kwenzeka ngezinga elingelikhulu ngomzuzu kodwa kudala amabutho omkhulu phakathi ketshezi ngenxa velocities, okushisa nezimo eyenziwe cavitation. Kuyinto awo acekela omkhulu ukuthi kungacinywa imihle ekhishini ngenxa isizinda flavour ngu ukuqhuma kwamapayipi amaseli noma ukuhlukaniswa particulates.
Enye yezinselelo e ukusetshenziswa kwalesi imishini Nokho kuyinto ukubophela futhi ulawule lo mbuso ngendlela ithuthukisa ukudla hhayi ubhubhisa kubo, breaking phansi ibe izakhi kancane ezifiselekayo.
I uthenge ultrasonic imodeli homogeniser UP200Ht lisibeka amandla esiphezulu atholakale umsebenzisi kanye homogeniser ngokwayo inombolo lokwehlukile ingasetshenziswa ukulungisa nokwenza kwayo ukuze ivumelane isicelo. Ngenjongo lo mhlahlandlela, imodeli esetshenziswa kwaba 200 watt iyunithi.
Usayizi i-sonotrode owufanelekela kunomphumela ezinkulu sendlela iyunithi eletha amandla ako.
Ngamagama silula, sikhulu endaweni ebusweni sonotrode amandla ngaphezulu ke kuzodinga ukushayela nganoma yisiphi amplitude inikezwe. I viscosity uketshezi uyophinde nethonya elikhulu ku-amandla adingekayo kuphela ukuze balawule sonotrode at amplitude inikezwe.
Cabanga indlela sonotrode njengoba piston noma plunger, uma piston idluliswa phezulu naphansi fast kakhulu ebhodweni okusamanzi mncane njengamanzi kulula ukwenza kanjalo ngisho ngesivinini ezinengqondo, Nokho ukugcwalisa imbiza nge sauce aminyene futhi efanayo ngeke kube yiqiniso lokho kuzodinga amandla okuningi ukuhambisa piston ngokushesha phezulu naphansi in the ketshezi ngenxa viscosity anda. Khulisa usayizi piston noma plunger futhi ngeke idinga umzamo owengeziwe ukulihambisa phezulu naphansi in the ketshezi.
Kunjalo we sonotrode. With sonotrode esikhulu afakwe, iyunithi kuzodingeka basebenze nzima kakhulu ukukhiqiza amplitude kunikezwa oscillation uma ketshezi has a viscosity okusezingeni eliphezulu kunokuhlala ongaphakeme viscosity uketshezi.
Sonotrodes nge emasayizi nabobunjwa labehlukene ngenxa UP200Ht
Ngasiphi kwamandla ayenikwe lokusetha sonotrode ezincane ngenxa surface area yayo ezokwenzela emikhulu ingcindezi iyehla iyenyuka bese ephakeme cavitation kwemibala eliseningizimu ngaphandle sonotrode amakhulu (njengoba amandla igxile surface area ezincane sonotrode sika).
Kungase kungabi kungenzeka ukushayela sonotrode emikhulu at amplitude efanayo kuze amandla aminingi kuyodingeka ukuba benze kanjalo, mhlawumbe okuholela ekuvaleni phiko ngenxa sindisa. Kulokhu ubukhulu sonotrode kufanele kungancipha noma ephakeme ngamandla iyunithi kutholakale.
Okufakwa ultrasound umfutho (Ngasiphi amandla kulungiselelwa inikezwe) incipha nge okwandisa surface area (sonotrodes emikhulu), lapho njengoba ultrasonic amandla umfutho kwanda nokuncipha surface area, noma uma sikubeka ngenye indlela, sonotrode ezincane ubeka eziningi amandla ultrasonic sinendawo encane, lapho njengoba sonotrode emikhulu zibhebhetheka amandla phezu endaweni elikhudlwana.
Lapho homogeniser isetshenziswa umsebenzi Imininingwane yenziwe sampuli nhlanganisela amandla okokufaka we homogeniser, le ivolumu isampula kanye isikhathi it is edalulwa. Ukuze uthole imiphumela reproducible, kumelwe sicabangele yonke nemingcele ezintathu. Ungalindeli ukubeka idivayisi inkomishi elincane lasemaphandleni elalinabantu ketshezi imizuzu emibili bese uthola umphumela ofanayo ilitha liquid phezu inkathi efanayo! Ngokulinganayo khumbula ukuthi nge ezincane osayizi isampula kanye yamandla aphezulu kokwenziwayo, le lokushisa isampula bayovuka ngokushesha. Ukuze lokushisa amasampula ebucayi kungcono ukusebenzisa engezansi izilungiselelo amandla phezu isikhathi esijana, ukuvumela amandla esifakiwe yi homogeniser njengoba ukushisa ukuba kwashabalala.
Okweqile isampuli kungadala kahle ezinye wona kanye ako wena ulinga ukubaleka ohlelweni.
High amandla okokufaka nazo zingase zibangele lingcole isampula, njengoba kungabonwa uma usebenzisa amafutha ezithile. Amafutha lapho zihlatshwa lokufakwako amandla okusezingeni eliphezulu ngesikhathi ichopho homogeniser naphula phansi okuholela ukunambitheka ezingemnandi kakhulu ezingasetshenziswa kuphela lingachazwa ngokuthi ukunambitheka wokusha zikagesi!
Ukuze lokushisa izinto ezizwelayo Ukupholisa ngomoya isampula kuyothuthuka imiphumela ezifana ngokusebenzisa okugeza ice noma ukufakwa ice ezinye owomileyo isampuli. Ukusebenzisa kwamandla okokufaka phezu isikhathi eside kusiza ukuhlakaza amandla ezikhishwe ohlelweni njengoba kufana usebenzisa iyunithi kokushaya imodi okuvumela Ukupholisa abanye phakathi ekuqhumeni ultrasound ngamunye.
Ngaphakathi electronics we homogeniser, umsebenzisi angakhetha isebenze unit in izindlela ezimbili eziyinhloko lokulawula.
Kule modi umsebenzisi ekhetha% amplitude esiphezulu oludingekayo ukuze sonotrode. Electronics ngeke base bezama ukuba sishayele sonotrode ngaleso amplitude futhi ngeke ulungise amandla okokufaka zedivayisi ukulondoloza amplitude edingekayo ngesikhathi sonotrode. Uma sonotrode surface area likhulu kakhulu ukuthi waqhutshelwa ngalesi amplitude ngamandla etholakalayo unit, amplitude ngeke sifinyelele value set futhi kungenzeka shaqa uma isimo ngokweqile ufinyelelwe.
Wokufaka Ukulawula Amandla
Kule modi umsebenzisi ubeka edingekayo amandla okokufaka Watts futhi electronics ngeke ulungise amplitude oscillations ukuze alawule amandla okokufaka abasebenzisi kulungiselelwa. Le modi ivumela amandla adluliselwe kulolu ketshezi ukuba ezilungisiwe ke ukushisa in the ketshezi kungagcini ukugwema ukulimala amasampula ezwelayo.
Ngaphezu ezimbili zindlela operation, kukhona imodi ishayela, lapho electronics ushintshele ku futhi ucime imijikelezo, Isikhathi okuyinto esabekwa umsebenzisi kusukela ekubeni ku-10% isikhathi off 90% kuya ku-90% isikhathi off 10%. Lokhu kunikeza nomphumela onesigqi futhi ziwusizo kokubili okulinganisela jikelele amandla Okokufaka isampula nokudala ukuyaluza ezinhle ngaphakathi isampula okokufaka kokuqala kokuba siphakame njengezindawo ezingenhla electronics kuzole ngesikhathi umjikelezo komsebenzi ngamunye.
Amacebo Jikelele tips
Uma usebenzisa homogeniser ngokuba ukumnika flavour imiphumela engcono etholakala lapho ukudla okuqinile liye lehla ngobukhulu ngaphambi kokuba homogenised, lokhu kuzokwenza ukwandisa indawo ephindwe obala i-sonotrode. Isimiso esifanayo siyasebenza uma usebenzisa homogeniser ngoba kuyizinhlayiyana Usayizi ukunciphisa. Cabanga nge-homogeniser njengethuluzi lokuqedela elihle hhayi umshini wesikolo! Ekunciphiseni i-particle ubukhulu bomsebenzi kwenziwa ngokushayisana okukhulu kwezinhlayiyana zezinhlayiya ezishesha amandla okukhiqizwa ku-sonotrode. Imiphumela emihle kakhulu izotholakala uma ezinye zezinhlayiya zinciphisa ngaphambi kokuba kutholakale indodanaication. Ukuqala ngokunciphisa ubukhulu bezinhlayiyana ezincane kakade kusho ukuthi indawo enkulu kakhulu iveza ukuthi i-sonication futhi ukuthi izinhlayiya ezincane zizosheshiswa ketshezi ngokushesha, okwenza kube khona ukushayisana okuphakeme ngamandla ukuze kuqhutshekwe phansi izinhlayiya. Umsebenzi omncane uzodinga futhi ukwenziwa yi-homogeniser, okuvumela izinga lokushisa lilawulwe kangcono.
Njengoba homogeniser usebenza ngempela ezingeni lendawo kuyasiza lapho lisetshenziswa namasampula enkulu ngithi abangamakhulu amaningana namamililitha noma ngaphezulu ukunikeza ukuyaluza ezengeziwe ukuqinisekisa ukuthi umthamo emhlabeni sonotrode iyavuselelwa, ukuqinisekisa sonication ephelele isampuli. Lokhu kunjalo ngokukhethekile kwabasebasha ngaphezulu i-viscous amasampula. A stirrer ezinhle kazibuthe kuyindlela ewusizo ukufeza lokhu. Sokuyaluza futhi kusiza ukuqinisekisa ivolumu okusamanzi emhlabeni sonotrode is hhayi ebilayo. Usebenzisa i okugeza ice, noma owomile ice izingcezu e isampuli kuzosiza ukususa amandla uwanika le sonification. Njengoba sekuxoxiwe uma okokusebenza lokushisa ebucayi, sebenzisa aphansi izilungiselelo amandla enkathini anda isikhathi noma sebenzisa imodi ishayela ukuze kukhawulwe okushisa ekhiqizwa kuleli isampula okuvumela isampula kuphole phakathi pulses sonic.
U-Christian Mittermeier ovela endaweni yokudlela enezinkanyezi ezinezinkanyezi zeMichelin Villa Mittermeier UP200Ht ngesikhathi emulsification ultrasonic